Downloads 12 643
Munyori: Model uye textures kubudikidza Dave Garwood, Beaufighter Sounds kubudikidza Lawdog http://daveg.cbfsim.org
Iva ziva, chete FSX-SP2 kana Yechipiri
Zvinenge unyanzvi! Yakanyatsotsanangura hapana mukumhurwa rakapotsa Cockpit ndiye Vakamupfekedza uye azere zvakadzama. Zvichaita kuti vanofara mafeni zvokurwisana ndege yehondo yenyika yechipiri.
Inosanganisira 10 repaints, uye zvechokwadi rinonzwika wakananga muenzaniso uyu izvo kuvandudza simulation.
The Bristol Type 156 Beaufighter, kazhinji kunzi vakangoerekana Beau, aiva British kumberi rinorema Ndege nadzurudzo of Bristol Aeroplane Company zvamboitika Beaufort Avangard bhomba magadzirirwo. Zita Beaufighter iri portmanteau kwe "Beaufort" uye "murwi".
Kusiyana Beaufort, iyo Beaufighter akanga refu basa uye vakashumira munenge dzemitambo zvose yokurwa Second World War, kutanga sezvo usiku anorwisa, ipapo sezvo murwi bhomba uye pakupedzisira kutsiva Beaufort somunhu Avangard bhomba. A musiyano wezvinyorwa yakavakwa muAustralia kubudikidza weDhipatimendi Aircraft Production (DAP) uye aizivikanwa muAustralia sezvo DAP Beaufighter.
Pfungwa imwe murwi kwemashoko Beaufort akanga vataurira Air Ushumiri kubudikidza Bristol. The pfungwa rakaenderana sokunonoka kukura uye kweShanduro Westland Whirlwind kanoni-vakapakata mapatya-injini anorwisa. Sezvo "Beaufort Cannon Fighter" aiva Kutendeuka kumbova design, budiriro uye kugadzirwa zvaigona kutarisirwa kure nokukurumidza kupfuura imwe itsva zvachose kugadzirwa. Nokudaro, Air Ushumiri yakabereka Specification F.11 / 37 rakanyorwa kumativi pfungwa Bristol kuti ive "zvokungoitawo" ndege pachimirirwa pakusuma zvakakodzera pamusoro Whirlwind. Bristol akatanga kuvaka zvikabva nokutora chikamu-akavaka Beaufort kubva dzaFord. The zvikabva wokutanga vakamhanyira 17 July 1939, zvishoma mwedzi anopfuura masere mushure akagadzira akanga atanga, zvichida nokuda kushandisa yakawanda Beaufort Magadzirirwo uye zvikamu. A kugadzirwa nechibvumirano 300 michina akanga akaiswa mavhiki maviri pamberi zvikabva F.17 / 39 kunyange nendege.
Kazhinji, misiyano pakati Beaufort uye Beaufighter vaiva zviduku. Mapapiro, kuzvidzora hukawanika, retractable kumhara giya uye chikamu aft pakati fuselage akanga akafanana kune vaya Beaufort, ukuwo bapiro centre chikamu chaiva chakafanana kunze mamwe Fittings. Bhomba Bay yakanga Haatauri mana mberi-vachiridzira 20 mamirimita Hispano Mk III cannons akanga akanyudzwa mukati rezasi fuselage nzvimbo. Ava vakanga pakutanga zvokudya kubva 60-kumativi ngoma, yaida radar opareta kuchinja zvombo ngoma manually - ane rwakaoma uye asingafarirwi basa, kunyanya usiku apo kudzingana ane bhomba. Somugumisiro, vakanga nokukurumidza chikatsiviwa bhandi-dzinoudya hurongwa. The cannons vakanga vaisanganisa kubudikidza nhanhatu .303 mu (7.7 mamirimita) Browning machineguns ari pamapapiro (starboard mana, vaviri chengarava). The nzvimbo zveshure murwi uye bhomba-aimer zvakabviswa, vachisiya chete mutyairi ari murwi-mhando Cockpit. The aidzidzisa / radar opareta akagara kuti shure pasi duku perspex sefuro apo Beaufort wacho dorsal turret akanga.
The Bristol Taurus injini yacho Beaufort havana simba zvokuti murwi uye vakanga yakatsiviwa zvikuru simba Bristol Hercules. Yokuwedzera simba akauya nedambudziko vibration; vari Purani vakanga akatasva refu, zvikuru kuchinja struts, izvo vakaramba kubva pamberi mapapiro. Izvi zvakaita muzinda regiravhiti (unotenderera) mberi, chinhu chakaipa kuti ndege magadzirirwo. It akakurudzirwa shure vachigurisira mhuno, sezvo pasina nzvimbo yaidiwa kuti bhomba aimer ari murwi. Izvi vakawanda fuselage seri bapiro, uye wakaita kuti unotenderera shure apo inofanira kuva. Pamwechete injini cowlings uye propellers zvino mberi mberi kupfuura muromo mhuno, iyo Beaufighter aiva characteristically stubby chitarisiko.
Kugadzirwa Beaufort muAustralia, uye vakabudirira zvikuru kushandiswa British akagadzirwa Beaufighters neDare Royal Australian Air Force, zvakakonzera Beaufighters kuvakwa maererano Australian weDhipatimendi Aircraft Production (DAP) kubva 1944 Kuvira. The DAP kuti musiyano wezvinyorwa kwaiva kudenhwa / Avangard bhomba sevatsigiri Mark 21: magadzirirwo Kuchinja vaisanganisira Hercules VII kana XVIII injini uye vamwe kuchinja zvidukuduku chombo.
Pakazosvika nguva British kugadzirwa mitsetse akavhara pasi muna September 1945, 5,564 Beaufighters yakanga yakavakwa muEngland, kubudikidza Bristol uye kubudikidza Fairey Aviation Company, (498) Ushumiri Aircraft Production (3336) uye Rootes (260).
Apo Australian kugadzirwa zvikanyarara muna 1946, 365 Mk.21s yakanga yakavakwa.
Bristol Beaufighter Mk 1 muna No. 252 dzechikwata, North Africa
By murwi mitemo, mashoko Beaufighter Mk.I akanga nani inorema uye anononoka. It aiva zvose-up kurema 16,000 LB (7,000 kg) uye vaifanira kumhanya mph 335 chete (540 km / h) pana 16,800 Ft (5,000 m). Asi izvi zvakanga atova zvose yaiwanika panguva, sezvo mamwe kweShanduro kudaro kwazvo Westland Whirlwind akanga akamira nokuda matambudziko kugadzirwa yayo Rolls-Royce Rukodzi runonzi injini.
The Beaufighter akawana pacharo kuuya kubva dzaFord kupeta anawo nguva seyokutanga British kuenda neherikoputa kunomisa (AI) Radar pazvinhu. With zvina 20 mamirimita kanoni akanyudzwa mukati yepazasi fuselage, mumhuno aigona anobvumawo radar antennas, uye mukuru roominess mukuru fuselage kwakaita AI midziyo kuti raigadzirwa nyore. Kunyange akatakura kuna 20,000 LB (9,100 kg) ndege nokubatwa zvakakwana kuti abate Ndege German. Pakazosvika 1941, chakabatsira pakaunda kuna Luftwaffe usiku vachirwisa. The siyana mangwanani tsvarakadenga iri Beaufighter nokukurumidza atanga basa mhiri kwemakungwa, apo ayo ruggedness uye rakavimbika nokukurumidza akaita ndege yakakurumbira pamwe zvokuchenesa.
A usiku-murwi Mk VIF yaipiwa kune squadrons muna March 1942, akashongedzerwa pamwe AI Mark VIII Radar. Sezvo nokukurumidza of Havilland Mosquito akatora pamusoro usiku anorwisa basa pezana pakunopera 1942, ndiye kwakanyanya Beaufighters akaita Mipiro zvinokosha nedzimwe nzvimbo dzakadai Anti mumagwa, pasi kurwisa uye-kumberi interdiction pose zvikuru theatre remapazi.
MuMediterranean, iye USAAF wacho 414th, 415th, 416th uye 417th Night Fighter Squadrons akagamuchira 100 Beaufighters Muzhizha 1943, yekuwana kukunda kwavo wokutanga July 1943. Kuburikidza chirimo ari squadrons yaiitisa zvose masikati mudungwe wemabhazi perekedza uye pasi-kurwisa kushandiswa, asi zvikurukuru nendege kuvhura kuzvidzivirira mishoni usiku. Kunyange zvazvo Northrop P-61 Black Chirikadzi murwi akatanga kusvika muna December 1944, USAAF Beaufighters akaramba kubhururuka usiku kuvhiyiwa muItaly uye France kusvikira manheru hondo.
Pakazosvika matsutso 1943, umhutu akanga kuwanikwa zvakakwana nhamba yokutsiva Beaufighter sezvo chikuru usiku anorwisa of RAF. Pakazopera hondo vamwe 70 vezvikepe kushanda RAF zviumbu vakanga vava ace apo ichibhururuka Beaufighters.
The Beaufighter dziri muna okuwedzera ari yokufungidzira KG 200 sezvo wavakanga yakadzikiswa nokuda reGermany zvakavanzika akavhiyiwa Unit KG 200, izvo vaedzwa, dzinoongororwa uye dzimwe nguva pachivande vakavhura vakatapa ndege muvengi muHondo Yenyika II. Coastal Command
1941 akaona kukura Beaufighter Mk.IC kumberi rinorema murwi. musiyano wezvinyorwa mutsva uyu akapinda mubasa May 1941 aine yokuzviparadzanisa No. 252 dzechikwata zvichishanda kubva Marita. The ndege dzabatsira saka muMediterranean pamusoro mumagwa, ndege uye ivhu huru kuti Coastal Raira akava chikuru User iri Beaufighter, kutsiva usingachashandi Beaufort uye Blenheim.
Coastal Command akatanga kutora chokuendesa the up-yavose sezvavakatarirwa Mk.VIC nechepakati 1942. Pakazopera 1942 Mk VICs vakanga vakapakata Avangard-akatakura zvombo, vakwanise kutakura British 18 mu (457 mamirimita) kana US 22.5 mu (572 mamirimita) Avangard externally. Yokutanga kubudirira Avangard aizotambudzazve Beaufighters vakauya April 1943, pamwe No. 254 dzechikwata kunyura zvavatengesi maviri kure Norway.
The Hercules Mk XVII, dzichiri 1,735 zvapano (1,294 KW) pana 500 Ft (150 m), paakagadzwa muna Mk Vic airframe kuti pave TF Mk.X (Avangard Fighter), inowanzonzi sevatsigiri "Torbeau." The Mk X akava mukuru kugadzirwa mucherechedzo Beaufighter. The wavanozvisunga musiyano wezvinyorwa pamusoro "Torbeau" akanga yakadana Mk.XIC. Beaufighter TF Xs aizoita zvakarurama kwokushora kutumirwa wave-pamusoro nokukwirira torpedoes kana "60lb" RP-3 zvitundumuseremusere. Early tsvarakadenga of Mk Xs akatakura arşive-wavelength Shona (mhepo-kuti-pose mudziyo) radar ne "herringbone" tunonzwa rakatakurwa mhino dzokunze mapapiro, asi izvi akatsiviwa mukupera 1943 maererano centimetric AI Mark VIII radar muNzvimbo imwe "thimble-mhino" radome, zvichiita zvose-okunze uye kurwiswa usiku.
The North Coates Urayai Bapiro Coastal Command, yakavakirwa pana RAF North Coates pamusoro muLincolnshire pamhenderekedzo, akava nzira iyo aibatanidza guru idzodzo pamusoro Beaufighters vachishandisa kanoni uye zvitundumuseremusere kudzvinyirira flak ukuwo Torbeaus yakarwisa yakaderera pamwero pamwe torpedoes. Zvidobi izvi vakaiswa muruoko tsika pakati pemwedzi 1943, uye munguva 10-mwedzi, 29,762 matani (27,000 tonnes) pamusoro kutumirwa vakanga vakanyura. Zvidobi vakanga vawedzera kujairana apo kutumirwa rikashamiswa kubva pachiteshi usiku. North Coates Urayai Wing vakavhura sezvo makurusa Anti-kutumirwa rehondo Second World War, uye chakaita kuti pamusoro 150,000 matani (136,100 tonnes) pamusoro kutumirwa uye 117 midziyo kuti kurasikirwa 120 Beaufighters uye 241 aircrew vakaurayiwa kana asipo. Izvi zvakanga hafu yose tonnage dzanyura zvose wavanozvisunga mapapiro pakati 1942-45. Pacific hondo The Beaufighter paakasvika squadrons muAsia uye Pacific nechepakati-1942. Kazhinji zvataurwa - kunyange chaiva Pakutanga chimedu RAF whimsy nokukurumidza kukwidzwa achishandisa wenhau British - kuti masoja Japanese akataura Beaufighter se "vachizevezera rufu", inonzi nokuti kurwisa ndege kazhinji havana kunzwa (kana kuona) kusvikira zvakare kunonoka. The Beaufighter wacho Hercules injini inoshandiswa ruoko valves izvo vasina ruzha yepasi giya rinowanzova poppet vharafu injini. Izvi kwaisava pachena ari kuderedzwa ruzha pamwero pamberi injini.
South mabvazuva Asia
Mune South-East Asian Theatre, iye Beaufighter Mk VIF kuvhiyiwa kubva India pausiku kumishoni pamusoro Japanese tikurukure muBurma uye Thailand. Mukuru-chaizvo, kuderedzwa pamwero kurwiswa vaiva nyanzvi, pasinei mamiriro kazhinji dzakakura nokuvatema okunze, uye chinochechenya kugadzira uye ichitarisirwa facilities.South mabvazuva Asia
South mavirazuva Pacific
Pamberi DAP Beaufighters akasvika Royal Australian Air Force vezvikwata zviri South West Pacific theatre, iye Bristol Beaufighter Mk IC akanga basa Anti-kutumirwa kumishoni.
Inonyanya ihwai rakanga Hondo Gungwa Bismarck yavakanga co-vakavhiyiwa pamwe USAAF A-20 Bostons uye B-25 Mitchells. Kwete 30 dzechikwata RAAF Beaufighters nendege panguva rechikepe kukwirira kupa rinorema suppressive moto nokuda pamafungu yokurwisa Ndege. The Japanese mudungwe wemabhazi, pasi pfungwa yokuti vakanga pasi Avangard kurwisa, akaita inouraya nokukanganisa tactical chokuchinja zvikepe zvavo zvakatarisa Beaufighters, achivasiya akafumura kuti tisangosiya kubhomba aizotambudzazve US svikiro Ndege. The Beaufighters ndokukuvadza kunonyanyisa kukuvadzwa pamusoro ngarava 'Anti-ndege pfuti, mabhiriji uye zvikwata panguva strafing uchibudisa yavo mana 20 mamirimita mhino cannons matanhatu bapiro-akanyudzwa .303 mu (7.7 mamirimita) zvigwagwagwa. transports sere uye vaparadzi mana yakanyura kurasikirwa ndege shanu, kusanganisira mumwe Beaufighter.
Kubva mukupera 1944, RAF Beaufighter zviumbu vakanga vachipa echiGiriki Civil War, pakupedzisira Kuregedzesa muna 1946.
The Beaufighter raishandiswawo nokuda mhepo mauto Portugal, Turkey uye Dominican Republic. Raishandiswa zvishoma nokuda veIsrael Air Force. Source Wikipedia